कस्तो छ आज तपाईंको राशिफल ? - Online Sajha	Online Sajha
कस्तो छ आज तपाईंको राशिफल ?
ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । व्यापार व्यवसायमा सफलता पाईनेछ । सुन्दर पहिरनले ब्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । आफन्तसँग गरमाईलो भेटघाट पनि हुनेछ । खर्च बढ्न सक्छ ।